Ardaydii Turkiga Loo Qaaday oo Lasoo Askareeyay. (Warbixin+Sawirro) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Ardaydii Turkiga Loo Qaaday oo Lasoo Askareeyay. (Warbixin+Sawirro)
Last updated Oct 1, 2017 248 0
Dowladaha isku sheega iney ku horumareen dhanka hubka islamarkaana u togan iney xoogooda u adeegsadaan danaha ay ka leeyihiin dhulalka Muslimiinta si ay u boobaan kheyraadkooda ayaa caado ka yeeshay iney isticmaalaan dagaalka loo yaqaano wakaaladda.
Micnaha dagaalkan ayaa ah in aad adeegsato ciidamo aanan kuwaaga ahayn oo aad dhaqaale yar siiso kadibna dartaa u dhinta ama u dhaawacma kuwaasoo aanan walwal ah kugu heyn wax walba oo ku dhaca. Sidaa darteed ayay hadda shisheeyaha kusoo duulay Soomaaliya waxay xoogga saarayaan iney si gaar ah u isticmaalaan malleyshiyo Soomaali ah maadaama ay Amisom ku ilka beeshay dagaalka 10-ka sano jirsaday.
Turkigu wuxuu Soomaaliya kusoo galay gargaar lagu micneeyay (booraan afkii laga qafilay khabarna hooseeyo) dhabtiina wey dhacday oo waa kan aan aragno in uu saldhig milatari ka sameystay xeebta Jaziira ee duleedka magaalada Muqdisho.
Munaasabaddii lagu furayay saldhigga waxaa lagu soo bandhigay ciidamo Turki ah oo ay qeyb ka yihiin arday Soomaaliyeed oo dhowr sano ka hor ka baxay dugsiyada sare ee Xamar. Ardaydan ayaa waxaa waalidiintooda loogu sheekeeyay in ay heleen deeq wax barasho una soo laaban doonaan iyagoo aqoonyahano ah, balse waxaa dalkii dib loogu soo celiyay iyagoo lasoo ciidameeyay oo diyaar u ah iney dano shisheeye u dhintaan sidoo kalana aanan xor u ahayn iney booqdaan eheladooda!
Arrintan ayaa waxay farriin cad u tahay waalidiinta ay ardaydoodu ka qalin jabin rabto dugsiyada sare ee la doonayo in la marsiiyo dariiqii kuwaas la marsiiyay, waxaana jirta xog hoose oo aan helnay oo sheegeysa in lasii kordhin doono ardayda la ciidameynao.
Ra’iisulwasaaraha DF Xassan Cali Kheyrre oo ah mas’uulkii ugu horeeyay ee taga saldhigga uu Turkigu sameystay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay marti qaadka loogu sameeyay dalkiisa, waxaana xusid mudan in aan la tusin qeyb kamid ah saldhigga oo aan la ogeyn ujeedada looga qariyay, sida uu inoo sheegay mid kamid ah saxafiyiintii goob jooga ahaa.
Intaa waxaa dheer in gabdho Soomaaliyeed oo kamid ah kuwii wax barashada Turkiga loogu qaaday ay shaqaale ka ahaayeen saldhigga, qaar waxay karinayeen cuntada, qaar waxay ka shaqeynayeen nadaafadda, halka kuwa kale oo ay da’doodu yar tahay ay joogeen qeybta nasashada iyo soo dhaweynta saraakiisha.
24 Decembar ee sannadkii 2014-kii, dhaqtar Turki ah ayaa isbitalka digfeer musqul ay ku jirtay ku weeraray gabar Soomaaliyeed oo kalkaaliso ah laguna magacaabo Daahiro Macallin Xassan, waxaana dhacday in muran kadib uu dharbaaxyo ugu jiiday. Haddaba iyadoo taa laga shidaal qaadanayo ayaa waxaa is weydiin mudan, xorriyad intee la eg ayay heli karaan hablaheena laga shaqaaleysiiyay xerada milatari ee ay joogaan ciidamada Turkiga ee NATO oo la ogsoon yahay iney aad u isticmaalaan khamriga?
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa Jimcihii lasoo dhaafay degaanka Bariire ku dishay in ka badan 60 askari oo ahaa dhallinyaro Soomaaliyeed oo uu Mareykanku qortay una adeegsanayay duullaankiisa, waxaa kasii horeeyay oo tiro intaa ku dhow o isla noocaas ah 3-dii Septembar lagu dilay degaanka Buulogaduud ee duleedka magaalada Kismaayo, sidoo kale 11 Septembar waxaa lasoo afjaray xero dhan oo ay deganaayeen ciidamo Soomaali ah oo ay Itoobiyaanku qorteen kuna taalla degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo. Waxaa u dambeeya maanta 01-10-2017 oo ay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab cagta marisay xero ku taalla degaanka Teed ee gobolka Bakool oo ay ku sugnaayeen askar Soomaali ah oo Itoobiyaanka u diiwaan gashanaa.
Tani waxay muujineysaa in dowladaha shisheeye ee kusoo duulay wadanka ay sidii dhuxushii oo kale dagaalada ugu hurinayaan ciidamada Soomaalida ee ay qortaan kuwaasoo qaarkood markii hore shaqadan halista ah lagu galiyay in la siinayo deeq wax barasho iyo nolol wanaagsan.